Namuhla, isilinganiso Russian Okuqukethwe akuzwakali esibandakanyeka ukuphila kwawo ngokuqondene nezombusazwe yezwe. Abaningi zijwayele ukuveza ukungeneliseki kwabo nge izenzo nezikhulu ezinezikhundla eziphezulu ihlezi TV. Kakhulu ngesilinganiso olukhulu ngokuya yisakhamuzi, angasetshenziswa indoda elula emgwaqweni - lingaphandle lokubhikisha, zihlelekile, ngokuvamile eduze emnyango wendlu yakhe. Ngokwemvelo, ngale ndlela, akukho okushintshile ngcono ukuphila. Ukuze wenze lokhu, empeleni, inhlangano yezepolitiki lapho abantu beveza imibono yabo ku lolutsite zokubusa. Ngamunye politstruktury imigomo nezinjongo, ngakho abavoti banelungelo lokuzikhethela. Ezinye ukuza "United Russia", omunye - e "Fair Russia", eyesithathu -. Esikhathini "Liberal Democratic Party"
Futhi-ke, kuyinto okuningi abasekeli "Left Party". Nokho, akubona bonke uyazi indlela ukujoyina iQembu LamaKhomanisi. Cabanga ngalo mbuzo kabanzi.
Kodwa abanye, yebo, unesithakazelo: "Yini eyenza ubulungu in the party" elivulekile ngomqondo "kufanele ngokushesha ukubalula ukuthi kulo mkhakha womsebenzi engalethi imali enkulu. Kodwa ungakwazi ukuthonya isinqumo imithetho edingekayo ephalamende. Uzokwazi yokwakha ama-career ngaphakathi eqenjini futhi ukwethula imibono yayo ezindaweni ezinkulu inqubomgomo. Ekugcineni, uyokwazi ukuxhumana njalo namalungu abakanye nabo party ababelana nombono wakho ngokuphila. Futhi ngaphambi uya umbuzo indlela ukujoyina iQembu LamaKhomanisi, amagama ambalwa mayelana nesakhiwo.
I yangaphandle "Marxism-Leninism"
Zanamuhla Communist Party - eqinisweni, owalandela zomthetho kanye owalandela iCommunist Party of the "omkhulu", okuyinto ekuqaleni ngokuthi lo CPSU (b).
Kodwa banengeke kwamaBolshevik imibono esikhathini esidlule, futhi iphupho lanamuhla lamaKhomanisi ukuthi umphakathi obuswa imithetho yobulungiswa kezokuhlalisana, izimiso inkululeko, ukulingana kanye collectivism njengoba nohlala njalo. Ngamanye amazwi, iQembu LamaKhomanisi kuyinto sebekubeke ngokumelene ukwakhiwa capitalism. Futhi lo mbono manje abantu abaningi bathanda. Kule ndaba, kufanele ukwenaba indlela ukujoyina iQembu LamaKhomanisi.
Ngakho, ukuze Unelungelo ukugcwalisa kwababusi bangamakhomanisi, kufanele ube yobudala esemthethweni. Okwesibili, ikhandidethi ngesikhathi lapho ungenela kumele kungabi kwenye inhlangano. Futhi, okwesithathu, iQembu LamaKhomanisi ngeke ukwamukela kuphela labo bazi izimiso zakhe hlelo.
Uma umuntu uhlangabezana nenqubo ezintathu ngaphezulu, bese esigabeni esilandelayo, ifunda ikheli iseli zesifunda "bangamakhomanisi" (division okuyinhloko), lapho isela lihlala khona, kanti khona ukukhuluma ikhanda ngokujoyina iqembu.
Ngemva kwalokhu "ezokwengamela lomsebenzi" uzoqala ezisebenza oda kuqala okuvela leQembu LamaKhomanisi. Ngaphezu kwalokho, kuyodingeka ukuba ekhuthele yonke imisebenzi okuqalwe amaKhomanisi. Kwaba ngemva LamaKhomanisi ukhetho umnyango eyinhloko izakhe ohlangothini oluhle, abanelungelo ukuthi uthumele isicelo ukuze ujoyine iqembu bese uqedela uhlu lwemibuzo enamathiselwe. Ngenxa "eyinhloko" umthetho, umsebenzi nenkathi eyizinyanga ezintathu yanele ukuba aqondise "elivulekile ngomqondo" omamukele candidacy samalungu amasha. Kodwa umbuzo indlela ukujoyina iQembu LamaKhomanisi, akugcini. Sifuna izici ezinhle amabili zokuhlola party emzabalazweni. Khona-ke, esigabeni se- "cell eyinhloko" ka amaKhomanisi uye okwamanje umhlangano, okuzokwenza unqume ukuthi ufanelwe ukuba iqembu - owalandela LamaKhomanisi noma cha. Kodwa akugcini lapho. Isinqumo replenishment iqembu "elivulekile ngomqondo" ekomidini wesifunda kumele uvume noma ekomidini idolobha LamaKhomanisi. Kuphela nangemva kokulandela inqubo ngenhla, umuntu ngeke babhale "ithikithi party" bese ubhalisa phakathi kwababusi lamaKhomanisi. Abantu abaningi bayazibuza, 'Indlela ukujoyina iQembu LamaKhomanisi eMoscow? "I-algorithm uyefana. Kukhona amagatsha okuyinto isinyathelo sisonke enhloko-dolobha kanye ezindaweni ezithize. Ngokwesibonelo, yeseli ezungelezela zonke eMoscow (eMoscow iKomiti Yombuso RFCP) sise Simferopol's'ka Boulevard, 24, Bldg .. 3 (tel.8 (495) 318 - 51 - 73).
Ubulungu e LamaKhomanisi ziwumthwalo izibopho ezithile. Okokuqala, kuzomele kube khona emihlanganweni "amangqamuzana ayinhloko". Okwesibili, kudingeka iqhaza kuzo zonke izinto, okuyinto ihlelwe ku isinyathelo we "Kwesokunxele". Okwesithathu, ilungu leQembu LamaKhomanisi liyadingeka ukuze akwazi ukufeza umsebenzi party, uhlobo okuyinto incike amakhono ngabanye, izithakazelo kanye ezingeni lolwazi. Okwesine, ubuholi Communist ukhuthaza labo nenkulumo-ze yabo nokuyaluza kubangela amalungu amasha ephathini. Nokho, ngenyanga yesihlanu, ubulungu LamaKhomanisi kuhilela nokukhokhwa ubulungu Imali.
Kunenye duty ukuthi kulandzelana ngekubaluleka, mhlawumbe, kufanele kube kuqala - kuyinto ekuhambisaneni Charter. benzi bokubi yayo angaphansi unswinyo kwezigwegwe: isixwayiso futhi ukhuze. Kungenzeka futhi ukukhishwa okungalindelekile kusuka ezinhlwini LamaKhomanisi.
Uma udumele e izimiso ubukhomanisi, ungahlala ukushiya iqembu. Kuyinto ngokwanele ukuze ubhale isitatimende niwayise yigatsha lendawo leQembu LamaKhomanisi.
Imibuso Anti-yeningi. kwemibuso yobushiqela kanye kobushiqela: izici eziyinhloko
Oleg Mikheev: Biography of omunye osopolitiki waseRussia eyindida kunazo zonke
Iziyalezo iPhone 5S: isethaphu, kusebenze futhi kokuqala
Isilinganiso se-Arctic Ocean sendawo ngezansi bese sezulu ukujula
I Bermuda Triangle. Pyramid ezansi Atlantic Ocean
Izimpethu esikhohlisayo: izimpawu e ingane futhi omdala
MS SQL Server: ukufakwa kanye ukucushwa. Inguqulo ye-MS SQL Server. MS SQL Server futhi 1c
"Shuya Chintz" - imikhiqizo ephezulu ikilasi ukwakhiwa yasekhaya